Christiane Taubira anokumbira muripo kune iyo DOM, wekutanga akabatwa pauranda - Afrikhepri Fondation
Mugovera, kubvumbi 10, 2021
Christiane Taubira anoda muripo kumadhipatimendi ekunze kwenyika, vekutanga vakaurayiwa nouranda
Eeconomist, ethnologist, aimbova director general weCaribbean confederation uye nhengo yeParamende, Christiane Taubira akaronga muna 1999 kuti uranda nekutengesa zvive zvinokodzera semhosva dzinopesana nevanhu. Ichi chikumbiro chinoratidzira danho rakakosha munhoroondo yehukama pakati peFrance neyaimbova makoloni, makore zana nemakumi mashanu mushure mekubviswa kwehuranda. Christiane Taubira anokumbira kuti mukana wekupihwa zvinhu uonekwe kumadhipatimendi ekunze (DOM), vekutanga vanobatwa nouranda nekutengeswa. Chikumbiro ichi chakarambwa nekomiti yezvemitemo, asi bhiri iri rakatambirwa pamwe chete nevatevedzeri vaivepo.
“[….] Nyaya yatakatora pachiri haisi yechinhu chisinganyanye kudzidza. Nekuti zvichazopfuura imwe nguva rugare nerunyararo zvisati zvauya kuzonyorovesa ronda rakadzama iro rinodiridza kusagadzikana kuzadzikiswa, nekuti zvinogona kunge zvisina hunhu kunzwa zvimwe zvezvinhu zvakatsanangurwa nemenyu. dambudziko rakareba uye rinotyisa nekuti nhoroondo haisi iyo sainzi chaiyo […] Rondedzero iyi haisi nhoroondo yezvinyorwa […]
Iyo haisi script yefirimu inotyisa, inotakura kuunganidzwa kwemaketani, tambo, tambo, tambo, handcuffs uye zviputi zvakagadzirirwa uye zvakagadziriswa kuti zvisvibise. Uyewo haisi mhosva, nokuti mhosva haisi nhaka uye nekuti vavariro dzedu haisi kutsiva. Iyo haisi chikumbiro chekutendeuka nokuti hapana munhu angave nechinangwa chokukumbira chiito chekuzvidemba kwakadzama uye kwechokwadi kuRipublic Republic, iyo inotsika tsika inobatsira kurambwa kwekusaruramisira. Haisi ikathartic (izvo zvinosunungura pfungwa dzepfungwa kubva pane zvinodzvinyirirwa, zvinotambudza kana zvinodzvinyirira) nokuti kushamwaridzana kwepedyo kunokonzera kwatiri kushingaira. Uyewo haisi basa rekutenda, nokuti tine chikonzero chekusimudzira vanhu vedu kuchema. Asi isu ticharondedzera kukanganisa, basa rekukanganwa, kunyarara, uye kutaura zvikonzero zvekutumidza zita uye chimiro kune zvinonyangadza izvi. Kubvira pakutanga, kambani yakaratidzirwa nehasha. Makumi gumi nemaviri akanga akakwana kuti aparadze zvachose kubva kuHaiti vagari varo vekutanga, vaAmerindi. Pakanga paine 11 mamiriyoni kumativi eAmerica mu1519, vaingova 2,5 mamiriyoni pamagumo ezana remakore rechitanhatu. Yakakurumidza kururamiswa: yakanga iri chikamu cheumishinari yekuvandudza, chinangwa chekuchengetedza zvinhu zvakashata, zvakatsvaga kuvimbisa kudzikinurwa kwevamwe. Zvakanga zvakatenderwa naCham kuti apiwe kutukwa. (kureva mwanakomana wechipiri waNowa uye zvizvarwa zvake, madzitateguru maererano neBhaibheri yevanhu vemaAfrica vakanga vakatukwa) [...] Kutengesa uye hutanda hwaive zvechisimba zvikuru. Mifananidzo inonzi inopfupikisa iyo inonyanyisa.
Muna 1978, kuongororwa kwakazara kwekutengeswa kwevaranda neuranda kunoitwa neFrance kwakagadzwa. Inoratidzika seyochitatu yeEurope simba revaranda. Izvo zvave zvichiita basa racho, basa iri, basa iri, mutsairi uyu ane vavariro chete ndeyegoridhe, sirivha, zvinonhuwira. Yakave yakabatanidzwa mushure mevamwe, pamwe nevamwe, muuranda hunoita kuti munhu ave mutapwa, achimuita mhuka yemutoro uye yeimwe nzvimbo.
The Black remitemo (mukutonga Louis XIV, kuti Code hauitirwi muna 1685, akatonga mamiriro muuranda rechiFrench dzaidzorwa uye upenyu varanda yevatema muzvitsuwa. It kweBhaibheri (pamutemo ratification inoita ishande (chiito ) ndiyo muitiro mativi wezvokutengeserana), izvo akagara pasi pemurairo French kwerinenge maviri emakore, iroro kuti muranda ari nhindi midziyo uye muranda akasunungurwa ane kuchisazitasingwi pomudzimai wake aimbova tenzi, chirikadzi uye vana . kwevaranda yakatora mazana mana, sezvo navigators akatanga kusvika Cape Bojador muna 1416, ari Rio de Oro (Southern chikamu Sahara). pasina nguva akava pachena kuti vokuAmerica vari kwakaderedza tsitsi nokuda uranda, kushungurudzwa, rokumanikidzirwa, chirwere, doro, hondo resistor.The Dominican mupristi Bartolomé of Las Casas, uyo zvinganaka kudzivirira, akataura hombe zvichiita A. fricans, inonzi yakasimba.
miriyoni vanhu gumi kusvika matatu, maererano akasiyana-siyana dzekare, vakadzi, vana, varume, akatambudzika kutengesa uye varanda uye zvichida, vachiti, mamiriyoni makumi manomwe, kana tichibatisisa vanofungidzira rinotaura kuti nokuda muranda akauya muAmerica, mana kana mashanu akaurayiwa mukurwisana, munzira inoenda kumhenderekedzo, mumisha yevaranda ve Goree, Ouidah, Zanzibar uye panguva yekuyambuka.
Kutengeserana kwetatu kwakaitwa munzvimbo yega kana yeruzhinji kune zvimwe zvido kana nekuda kwezvikonzero zveHurumende. Hurongwa hwevaranda hwakanga hwakarongedzwa kutenderedza masango ehurumende (kurudyi chinova chikamu chedome kana chiri cheveruzhinji) chakabudirira kana chakabudirira kupfuura chevafundisi nevagari vega. Kwenguva yakareba kwazvo, kusvika 1716, makambani akazvimirira akatonga kunze kwekuzvimirira (kunyanya Compagnie des indes occidentales, yakagadzirwa naColbert muna 1664, kozoti Compagnie du Sénégal muna 1674. mumazana emakore eLumière, kuda kuvhurwa kwehumambo. Iwo mavara patent (chitupa chegungwa chehutsanana hwechikepe chiri kusimuka) chaNdira 16, 1716 chakapa mvumo kuzviteshi zveRouen, Saint-Malo, La Rochelle, Nantes neBordeaux kudzidzira kutengeserana kwevaranda, vachipesana nemapaundi makumi maviri pamusoro wevanhu vatema vakaunzwa kuzvitsuwa uye kusunungurwa pamutero wekunze. chikamu chikuru, kunyarara kunowanzo svika uye kunotungamira ku concordance yevakuru vehurumende, avo vaida kuita kuti vanhu vakanganwe uye nezve vazukuru vevaranda, avo vaida kukanganwa. Asi isu tinoziva kugoverana kwemabasa. […] Tiri pano ini kuti nditi chii kutengeswa kwevaranda nehuranda, kuyeuka kuti Kujekerwa kwakaratidzirwa nekumukira kutonga kweChechi, nekudiwa kwekodzero dzevanhu, nechisimba chakasimba chedemokrasi. , asi zvakare kuyeuka kuti, panguva iyi, hupfumi hweminda hwaive hwakabudirira zvekuti bhizimusi rekatatu raiziva mutinhimira waro wakakura pakati pa1783 na1791.Tiri pano kuti titi kana Africa yakanamatira mune kwete kukura kuri zvakare nekuti zvizvarwa zvevanakomana nevanasikana vake zvakabviswa kwaari; kuti kana Martinique neGuadeloupe vanovimba neshuga hupfumi, zvichibva pamisika yakachengetedzwa, kana Guyana ichinetseka zvakanyanya kudzora zviwanikwa (kunyanya huni negoridhe), kana Reunion ikamanikidzwa kutengesa kusvika zvino kubva kune vavakidzani vayo mhedzisiro yakanangana nekusarongeka kwekoloni; kuti kana kugoverwa kwenzvimbo kusingaenzaniswi, iwo mugumo wakaburitswa wehutongi hwemba.
Tiri pano kutaura kuti kutengeswa kwevaranda uye uranda hwaive uye imhosva kurwisa vanhu; […] Uku kunyorwa mumutemo, iri izwi rakasimba, risingazungunuke, iri izwi repamutemo uye rinogara rinomiririra yekufananidzira, yekutanga uye pasina mubvunzo ndiyo ine simba kupfuura zvese. Asi zvinokonzeresa kutsiva kwezvematongerwo enyika nekutarisa hwaro husina kuenzana hwenzanga dzekunze kwenyika dzakabatana nehuranda, kunyanya kuripwa kwevagari vakatevera kubviswa. Izvo zvakare zvinofungidzira kudzoserwa kwetsika uko kunokanda muchiedza chizere cheni yekuramba iyo yakarukwa neavo vairamba muAfrica, nemamononi (Varanda vari kutiza) vaitungamira mafomu ekupikisa mumatunhu ese, nevagari. uye vashandi veFrance, kuburikidza nehondo yezvematongerwo enyika uye chiito chevazivi uye vanoparadza.
Izvo (izvi zvakanyorwa mumutemo) zvinofungidzira kuti kuripwa uku kunobatanidza kuedza kwakaitwa kudzura rusaruraganda, kuziva kwakamuka kupesana kwemarudzi, kutarisana nekusarongeka. Inofunga kugadziriswa kwetsika, kunyanya nekugadzirisa nzvimbo dzekurangarira. vari muhupenyu uye hupenyu ihwohwo huri mumavara, uye kuti tsika nemagadzirirwo, paanopindirana, ane hupenyu hwakawanda uye hwakawanda husimba. […] Léon Gontran Damas (1912-1978), mudetembi wechiGuyanese uye mutevedzeri weSocialist weGuyana, Co-muvambi wesangano reegritude naAimé Césaire naLéopold Sédar Senghor: vakashevedzera chigumbu chake: "Ndiri kunzwa kugona kuridza mhere zvachose kune avo vanondikomba uye vanonditadzisa zvachose kuva murume ".
Kutaura kuNational Assembly ye18 February 1999
Izwi revakadzi - Iyi hurukuro hombe dzakaratidza nhoroondo
7 nyowani kubva ku € 21,30
7 yakashandiswa kubva ku16,13 €
Tenga € 21,30
Yakapedzisira kugadziridzwa muna Kubvumbi 9, 2021 8:38 PM
Zvakavanzika zveGibhithe - Alexandre Moret (PDF)
Rwendo rwekutanga - Matthieu Grobli
Chinhu chakazvimirira - Paramahansa Yogananda (Audio)
Muna 2020, Broadband internet ichave ichiwanikwa nyangwe mumisha muAfrica